Baro Terireelka Airedale - Taranka
Baro Terireelka Airedale
Ku soo dhowow, eeyga jecel eeyga! Waxaan jeclaan lahayn inaad la kulanto Boqorka Terriers, Terire Terire.
Naqshad leh, kalsooni leh, geesi ah, caqli badan, dhoola cadeynaya, oo doqon ah - maxaad kaloo ka codsan kartaa xayawaanka, sax?
Laakiin haddii aad qorsheyneyso inaad iibsato ama korsato Airedale, waa inaad barataa dhammaan macluumaadka ku saabsan shakhsiyadiisa, baahidiisa, iyo dabcan, quirks.
Aynu ogaanno haddii tani ay tahay jaanis kugu habboon adiga!
Asal: Maxay ku caan baxeen Airedale Terriers?
Sidee u eg yahay Terire Terrier-ka?
Dabeecad: Airedales ma yihiin eeyo qoys oo wanaagsan?
Daryeelka Terireelkaaga Airedale
Caafimaadka Airedale Terrier
Immisa ayey ku kacaysaa Airedale Terrier Puppy
Airedale Terrier VS. Terry Welsh
Ma xiiseyneysaa isku-darka Airedale Terrier?
Cunnadan Ey ma adiga ayaa kugu habboon?
Airedale waxaa lagu abuuray taranka a Terry Welsh ( Madow iyo Tan Terrier ) , ah Otterhound , gudaha Boqortooyada Ingiriiska . Ujeeddadu waxay ahayd in la abuuro eey ugaarsan kara xayawaanka yaryar iyo ciyaar weyn markii si sax ah loo tababaray.
Dadka qaar ayaa sidoo kale ogaan kara astaamaha labada Terrier-ka Irishka iyo Bedlington Terrier gudaha Airedale.
Airedales sidoo kale waxay gacan ka geysteen taranka kale, sida Yorkshire Terrier . 12 sano gudahood markii ay isdhaafsanayeen, waxay caan ku noqdeen cayaaraha.
Bandhiggii ugu horreeyay eey soo galaan Dooxada Aire wuxuu dhacay 1864, halkaas oo garsoorayaasha ay ku sifeeyeen noocyada mid aad u fiican. Waqtigaan, taageerayaashu waxay u bixiyeen iyaga Terire Terrier-ka , inkasta oo tan kaliya ay rasmi noqotay 1886.
Intii lagu guda jiray Qarnigii 19aad , Webiga Aire martigaliyay dhowr show eyga goob ahaan. Bandhigu wuxuu u baahan yahay noocyada Terrier-ka inay jiir u raacaan biyaha oo ay dilaan, taas oo keentay caannimada caannimada.
1900, kii Naadiga Airedale Terrier Club of America la aasaasay. Waxay bilaabeen koob la yiraahdo Bowl Airedale, kaas oo soo bandhigaya magacyada kuwa la siiyay Abaalmarinta ugu Fiican.
Warmen waxay adeegsadeen Airedales Dagaalkii Koowaad ee Adduunka sida daawato eeyaha , eeyaha ilaaliya , iyo jiiriyayaal . Dadku sidoo kale waxay u isticmaalaan iyaga dhaqid , sida soo qaadayaasha , eeyaha shaqeeya , eeyaha ugaarsiga , iyo eeyaha booliska .
Warren Harding iyo Calvin Coolidge sidoo kale waxay ahaayeen milkiileyaal iyo taageerayaal nooca. Sannadkii 1949, ayaa Naadiga Kennelka Mareykanka ( AKC ) kaalinta Terire Terrier-ka 20th caan ka ah, inkasta oo tan tan iyo markii ay hoos u dhacday.
Tani waa noocyada ugu badan ee terriers; taasi waa sababta, sidaan horay u soo sheegnayba, dadku badanaa waxay ugu yeeraan dhalashada Boqorka Terriers . Waxaa sidoo kale mararka qaarkood loo yaqaan Territoriyada Bingley ama Xamaaliinta Waterside .
Terrier-ka Airedale ‘S madaxu waa dheer yahay waana fidsan yahay laga bilaabo dhakada ilaa sankooda madow. Dhegahoodu waxay u laabmaan dhinacyada, waxayna leeyihiin indho yar-madow oo madow.
Qoorta ayaa u qulquleysa dhabarkooda gaaban, garbaha garbaha ayaa fidsan. Waxay leeyihiin lugo dhaadheer oo muruqyo ah oo u dhigma inta kale ee jirkooda.
Laabtoodu way dheertahay laakiin ma ballaadhna waxaana laga yaabaa mararka qaarkood inay yeelato balastar cad. Cuties-yadaani waxay leeyihiin cago yar yar, dhogorkooduna waa mid dhudhun ah oo xoogaa ruxruxa.
Dabada Airedale waa mid dheer oo adag, oo dadku dhaqan ahaan ugama dhigtaan, in kastoo qaarkood ay sameeyaan markay eyyo yihiin.
The Naadiga Kennelka Mareykanka sheegaysaa in ay muujinayaan dabo eyda waa in aysan gadaal u leexin, xoog yeelan, oo noqon dherer macquul ah.
In kasta oo xiritaanka ay sharci darro ka tahay waddamada qaarkood iyadoon loo helin sabab macquul ah, haddana dadka ka yimid dalal kale ayaa wali sameeya.
Cabir: Immisa ayuu le'eg yahay Terre Terrier-ka?
Airedale Terriers waxay leeyihiin dherer ah 21 ilaa 23 inji (53 illaa 58 cm) garabka oo gaari kara culeys ah 70 rodol (32 kg) Dheddigga ayaa waxyar ka gaaban oo miisaankoodu yahay 40 illaa 55 rodol (18 illaa 25 kg).
Marka laga reebo inaad ka fikirto cabirkooda, waa inaad sidoo kale tixgelisaa heerka waxqabadka taranka this. Iyadoo taas la sheegay, Airedales ma ahan xayawaan ku habboon guryaha dadka deggan.
Waxaan kugula talineynaa guri waasac ah oo leh daarad weyn oo leh deyr dheer oo aamin ah .
Ma isweydiineysaa haddii uu jiro Terire Mini A Terroiler? Ma jiro, laakiin waxaad u tagi kartaa foorarsiga aadka u yar sida kan Terry Welsh . Waxay u egyihiin Airedales laakiin ka yar oo aan fiicnayn marka loo eego kuwa kale ee wax xarajiya.
Koodhadhka & midabbada Airedale
Koodhka Airedale waa mid madow iyo midab ama grixi iyo tan, iyadoo badankood ay yihiin tan. Guud ahaan waxay leeyihiin madow ama grixi dhabarka ku dhaji oo kuuskuus lugaha, laabta, caloosha, iyo madaxa.
Khamri waxaa loola jeedaa isku dar ah timo madow iyo cadaan ama cirro. Airedales waxay leeyihiin a jaakad laba jibbaaran , iyadoo dhogorta jilicsan ee jaakad iyo timo qoyan oo dhaadheer sida jubbadda sare.
Koodhadhkooda kore badanaa waa cufan yihiin, halka koodhkoodu gaaban yahay oo jilicsan yahay. Jaakadani noocani waa mid hooseysa, markaa waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u cadayato oo aad u xajiso mararka qaarkood.
Timaha Airedale ma aha inay ahaadaan kuwo aad u dheer maxaa yeelay waa inay jiifsadaan oo ay ku dhow yihiin jirkooda.
Tani ey caqli badan way ku fiican tahay carruurta, in kasta oo cabbirkooda iyo xiisehoodu ay ku badan karaan carruurta aadka u yaryar. Carruurta iyo eyduba waa inay helaan tababar sax ah goor hore si ay u samaystaan ​​dammaanad habboon.
Waalidiinta waa inay marwalba kormeeraan isdhexgalka. Waxyaabaha la gooyey waxay noqon karaan kuwo aad u ilaaliya xubnaha qoyska , taas oo ka dhigaysa eeyaha ilaalada wanaagsan.
Sida arday adag oo rabitaan leh, waxaa laga yaabaa inaysan ku muujin jacaylkooda kalgacal laakiin waxay ku raaxaystaan ​​inay dadkooda la joogaan. Airedale ayaa sameeya wax fiican xayawaanka guriga lagu haysto iyadoo xaddiga saxda ah ee jacaylka.
Markasta oo ay helaan feejignaan dheeri ah, waxay u dhowdahay inay u kacaan xumaan. Airedales ayaa sidoo kale la jaan qaadi kara xayawaanka kale, gaar ahaan haddii ay isla koraan.
Bulsho laga soo bilaabo da'da yar waa fikrad fiican in laga hortago inay cayrsadaan ama ugaarsadaan xayawaanka kale.
Waa eeyo madaxbanaan, badiyaa ugaarsadaan bilaa amar, waxayna u badan tahay inay baacsadaan xayawaanka yaryar ee loo arko inay ugaarsadaan.
Airedales sidoo kale waa xoolo dhaqato wanaagsan, in kastoo ay tahay inaad siiso tababar habboon; haddii kale, waxay ka xanaajin karaan xayawaanka waaweyn.
Maaddaama dadku u soo diyaariyeen Airedales inay ugaarsadaan oo loo isticmaalo riwaayadaha si ay u ugaarsadaan jiirka biyaha, iyagu waa dabaasha wanaagsan, waxayna jecel yihiin dabaasha.
Waa inaadan kaligood uga tagin iyaga muddo dheer, maxaa yeelay taasi waxay u horseedi kartaa caajis iyo dhaqan burburin. Waxay u baahan yihiin jimicsi joogto ah si ay uga takhalusaan tamartooda xad-dhaafka ah.
Hal socod maalintii ayaa kufilan kara, laakiin waxaan kugula talineynaa labo, oo ay weheliso boosas badan oo beerta ah ama ardaaga lagu ciyaaro. Waxaad sidoo kale siin kartaa alaabooyin kala duwan oo kiciya si ay mashquul ugu noqdaan intaad maqantahay.
Tareeradu waa nooc caan ah oo afka laga qaato guud ahaan. Sidii aan horeyba u soo sheegnay, dadku waxay u soo kiciyeen Airedales ugaarsiga, sidaa darteed waxay u muuqdaan inay ku ciyoodaan waxyaabo ay u arkaan inay yihiin ugaarsi ama hanjabaad.
Tababar adeecid iyo is dhexgalka bulshada ayaa laga yaabaa inay kaa caawiso tan, maaddaama ay baranayaan inay raacaan amarro iyaga ka fogeeya xayawaanka ay u arkaan inay quudinayaan.
Kaqeybgalka fasallada tababarka ee ardaygaaga waa lama huraan, maadaama ay mararka qaarkood caqabad ku noqon karaan la qabashadooda.
Sababtoo ah garaadkooda iyo kalgacalkooda darteed, tababarka eygaaga ayaa fududaan kara, in kastoo aad kala duwanaan karto tababarka si aad uga fogaato inaad caajiso.
Tababbarka weel kasta oo eey ah ayaa caqabad ku noqon kara; hase yeeshee, soo socda tallaabooyinkan fudud kaa caawin kara. Maskaxda ku hay in eeyadan laga yaabo inay qabtaan xanaaq iyo inay noqdaan dagaalyahan haddii aad ula dhaqantid si xun.
Waxaan kugula talineynaa waxyaabaha soo socda suufka tababarka si loogu isticmaalo gudaha.
An Airedale’s jaakad dhogor ah waxay ubaahantahay dayactir yar, in kastoo aan kugula talineyno cadayashada todobaadlaha iyo qurxinta mararka qaar.
Caddaynta eygaaga toddobaadle ah ayaa kaa saara timo dhintay taasi waxay badanaa u daadsan tahay si dabiici ah waxayna u baahan tahay nadiifin badan oo gurigaaga ah.
Waxaad baran kartaa inaad eyga uxirto kaligaa, ama waxaad kaheli kartaa a sumcad leh hagaajiye inay shaqada kuu qabato.
Ardaygaagu wuxuu doorbidi doonaa cimilada diirran sababtoo ah jaakadkooda khafiifka ah; waxaan kugula talineynaa in loo ogolaado gudaha inta lagu jiro bilaha qabowga ee sanadka.
Aqalku wuxuu noqon karaa maalgashi wanaagsan haddii aad uga tagto banaanka markaad guriga ka maqnayn.
Uma baahnid inaad si joogto ah u maydho cunuggaaga, laakiin waa fikrad wanaagsan inaad ku maydho saddex illaa afar jeer sanadkii si ay ugu ekaadaan kuwo waalan.
Hubso inaad siisid alaabo adag oo adkaysi u leh ilmahaaga yar markii aadan ka agdhowain si looga ilaaliyo inay caajisaan.
Ka hubi dhagaha ilmahaaga si joogto ah casaan ama ur; haddii mid ka mid ah ay jiraan, waxaa fiican in la geeyo dhakhtarka xoolaha si loogu daaweeyo.
Jimicsiga Terire Terrier-kaaga
Airedales ayaa sarreeya heerarka tamarta una baahan jimicsi dhexdhexaad ah. Waxay sameystaan ​​lamaanayaal waaweyn oo orod ah waxayna badanaa ku daali doonaan.
Waxay ku sii nagaadaan da 'yarta qalbigooda meel fog noloshooda waxayna ku raaxaystaan ​​ciyaar joogto ah. Waa inaad isku diyaarisaa inaad 40 ilaa 60 daqiiqadood la qaadato ardaygaaga maalin kasta si aad uga takhalusto tamartooda xad-dhaafka ah.
Arooska: Ma Airedale Terriers hypoallergenic?
Sidii aan horey u soo sheegnay, qurxinta uma baahna inay ahaato mid joogto ah, laakiin halkii laga ilaalin lahaa in cunugaagu u ekaado mid caqli badan. Haddii aad haysato qalab sax ah iyo xoogaa aqoon aasaasi ah, adigu waad xejin kartaa eeygaaga adigu.
Xusuusnow in eeygaagu uu ku raaxeysan doono baaritaanka xoolaha iyo guurka haddii aad tababar wanaagsan siiso da 'yar.
Cuties-yadaani waxay leeyihiin jaakad hypoallergenic wax badanna ma daadiyaan, sidaa darteed dad yar ayaa la kulma astaamaha xasaasiyadda inta ay la nool yihiin.
Timahoodu wax yar bay guntan karaan haddii ay dheeraadaan, laakiin waxaad u isticmaali kartaa shanlo si aad u kala furfurto intaad ku jirto cadaygaaga toddobaadlaha ah. Waxay leeyihiin ur eyga caadiga ah sababo la xiriira saliidaha maqaarkooda, laakiin waa wax aad kula qabsan doonto.
Quudinta Terire Terrier-kaaga
Waa inaad ku quudisaa eeygaaga cunto isku dheellitiran iyadoo loo eegayo culeyska lagula taliyay ee da'dooda iyo baaxaddooda. Waa inaad tixgelisaa tayo sare leh cuntada eyga ama cunnada ceyriinka ah ee ogolaanshaha dhakhtarkaaga xoolaha.
Isha ku hay heerka culeyskooda, gaar ahaan inta lagu jiro tababarka, maadaama qaadashada kalooriga badan ay u horseedi karto cayilnaan .
Waa inaad wax ka barataa waxa cunnooyinka dadku ay aamin u yihiin in cunugaagu cuno iyo kuwa aan ahayn ka hor inta aanad wax ka siinin saxankaaga.
Xusuusnow, markuu ilmahaagu yar yahay, waa inuu cunaa cunnooyinka cunugga oo u gudbaa cuntada dadka waaweyn markuu weynaado. Eygaaga waa inuu helaa biyo macaan isaga asaga marwalba.
Eyga qaangaarka ah ayaa cuni doona qiyaastii seddex koob oo kibib ah maalintii, in kasta oo aad ku dhegan tahay miisaanka lagu taliyay baakadda cuntada.
Waxaan kugula talineynaa inaad siiso cunugaaga laba jeer maalintii halkii aad uga tagi laheyd cuntada maalintii oo dhan. Tani waxay ka caawin doontaa inay cunaan qadarka saxda ah oo ay isku dheellitiraan, si aysan u gaajoon maalinta dambe.
Waad u qorsheyn kartaa qiyaastii $ 68 raashin bishii bil kasta Airedale Terrier. Cuntada aad dooratay adigaa iska leh, in kastoo ay tahay inuu kugula taliyo dhakhtarka xoolaha si loo hubiyo inay ku habboon tahay eygaaga.
In kasta oo eygaggan ku habboon guud ahaan ay caafimaad qabaan, waxay leeyihiin xoogaa yar dhibaatooyinka caafimaad si loo fiiriyo. Kuwa bixiya badankood waxay bixin karaan nadiifin caafimaad oo muujineysa natiijooyinka baaritaanka lagu sameeyay eeyaha xaaladahan.
Haddii aad rabto, waxaad ka eegi kartaa kuwan iyada oo loo marayo bogga internetka ee 'Orthopedic Foundation for Animal'.
Hip Dysplasia : Hip dysplasia waa xaalad la iska dhaxlo oo badanaa lagu arko eeyaha waaweyn ee waaweyn, in kasta oo noocyada yaryar ay iyaguna heli karaan. Waxay dhacdaa marka lafta misigta iyo bowdada aysan si siman u simbiriirixan laakiin ay is xoqdo midba midka kale. Nasiib wanaagse, xaaladdan waa lagu daaweyn karaa kaabisyo, inkasta oo dysplasia sinta daran ay sababi karto qalliin qaali ah.
Haddii aad aragto hoos udhac dhaqdhaqaaqa ama dhaqdhaqaaqyo kaladuwan, waxaad ubaahnaan kartaa inaad booqato dhakhtarka xoolaha si loo baaro.
Muruqyadaadu sidoo kale way ruxruxi karaan miskaha, waxay leeyihiin xoogaa xanuun ama qallafsanaan mararka qaarkoodna waxay noqon karaan kuwo curyaan ah xagga dambe ee dambe. Waxa kale oo aad ogaan kartaa kororka muruqyada garabka iyo horumarka muruqyada bowdada.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xaaladdan Naadiga Kennelka Mareykanka .
Dermatitis: Waxaa laga yaabaa inaadan ku arkin dermatitis-kaaga ilmahaaga ilaa uu ka bilaabo inuu ku dhufto, oo wuxuu noqdaa mid bararsan, cuncun, ama cayriin. Waxaad ku daaweyn kartaa boomaatada la mariyo ee ka timaadda dhakhtarkaaga xoolaha ama shaambo kale oo lagu maydho.
Xasaasiyadaha: Xasaasiyadda ayaa mararka qaarkood sababi karta maqaarka maqaarka. Eygaaga waxa laga yaabaa inuu xasaasiyad ku leeyahay cuntada ama wax ka mid ah deegaankooda oo ay la kulmaan ama neefsadaan. Waxaad ka hortageysaa dabka xasaasiyadda leh ee cuntada adigoo ka fogaanaya waxyaabaha qaarkood.
Dhakhtarkaaga xoolaha ayaa kuu qori kara daawo, cunto kala duwan, iyo mararka qaarkood xitaa saliidaha CBD si loo daaweeyo xasaasiyadda deegaanka.
Dhaqtarkaaga xoolaha ayaa kugula talin kara dariiqa ugu wanaagsan ee loo maro si looga hortago xasaasiyadda. Maskaxda Ku hay; waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad beddesho deegaankaaga ardaygaaga.
Qanjirka 'thyroid' Dhibaatooyinka: Dhaqdhaqaaq la'aan tayroodh waxay isu soo bandhigi kartaa xaalado kale sida timo lumis, miisaanka oo kordha, suuxdin, caajis, ama xaaladaha maqaarka. Dhakhtarkaaga xoolaha ayaa ogaan doona hypothyroidism adoo samaynaya baadhitaano qaarkood una qori doonta dawo eeyahaaga.
Waxaa laga yaabaa inuu ku sii jiro daawadan inta noloshiisa ka dhiman, in kasta oo qiyaasta ay is beddeli karto. Dhakhtarkaaga xoolaha wuxuu u baahan doonaa inuu tijaabiyo heerka tayrood eeygaaga sanad walba maadaama qiyaasta laga yaabo inay u baahato inay is bedesho si waafaqsan.
Qanjirka 'firfircoonida' ee jirka ee xad-dhaafka ah wuxuu sababi doonaa hyperthyroidism, oo u horseedi kara kansar.
In kasta oo ay tani ka sii culus tahay, dhakhaatiirta xoolaha ayaa daweyn kara. AKC ayaa bixisa macluumaad dheeraad ah marka la eego daaweynta hyperthyroidism.
Atrophy-ka Retinal Horusocod: Xaaladdaani waxay saameyn ku yeelan doontaa aragtida eygaaga. Waxay ku bilaabankartaa indho beel habeen waxayna sababi kartaa indho la'aan wadarta. Eeyaha badankood waxay la noolaan karaan xaaladan, haddii deegaankoodu ahaado mid joogto ah. Nasiib darrose, ma daaweyn karaan xaaladdan, in kasta oo soosaarahu uu tijaabin karo ka hor inta uusan safka sii wadin.
Xuddunta Hernia: Xaaladdaani waxay isu soo bandhigeysaa sidii buruq ku dhow xudunta eyga. Hadday yartahay, wuu xirmi karaa waqti kadib umana baahna daaweyn. Mararka qaar eydu waxay la noolaadaan hernias yar noloshooda oo dhan. Dhakhtarkaaga xoolaha ayaa kaa saari kara hernias-ka waaweyn markii ilmahaagu u tegayo in la nadiifiyo, maxaa yeelay waxay leedahay halista xaalado nafta halis geliya.
Cudurka Von Willebrand: Haddii aad dareento in eeyahaagu uu sankiisa dhiig ama dhiiggiisu saxaradiisa ku jiro laakiin haddii kale ok, waa laga yaabaa inuu qabo cudurka Von Willebrand. Xaaladani waxay ka hortagtaa dhiigga inuu xinjiroobo, dhakhaatiirtu waxay ogaan karaan marka eygaagu u dhexeeyo saddex illaa shan jir.
Vets waxay ku maareyn kartaa iyadoo la isticmaalayo tolmo ama dhaawacyo kala duwidda, iyadoo laga fogaanayo daawooyinka qaarkood, iyo dhiig lagu shubo qalliinka ka hor.
Dhiigbaxa Gastroenteritis: Haddii ilmahaagu si lama filaan ah u bilaabo matag ama uu yeesho shuban dhiig ku jiro, waxaad u baahan tahay inaad u qaadatid dhakhtarka xoolaha. Wuxuu tirtiri karaa cuduro kale oo soo bandhiga isla astaamaha kahor intaan la dhameystirin ogaanshaha cudurka. Nasiib wanaag, cilladani waa mid la daaweyn karo oo waxay hoos ugu dhici kartaa maalmo yar gudahood.
Si kastaba ha noqotee, eeygaagu wuxuu u baahan doonaa inuu qoyaan ahaado si looga hortago xinjirowga xididdada dhiigga ku dhaca, oo sababi kara dhimasho. Dhakhtarkaaga xoolaha ayaa waliba kuu qori kara antibiyootiko iyo nidaamyada ladagaalanka boogaha.
Waxaad ubaahantahay inaad dhaqso wax uga qabato oo aad il joogto ah ugu hayso eygaaga hadii aad ka shakido cilladan.
Kansarka: Markaan maqalno erayga kansar, maskaxdeenu mar hore ayey u booddaa dhimashada. Nasiib wanaag, xayawaannada xayawaanku way daweyn karaan kansarka haddii ay goor hore arkaan. U kaxee eeygaaga baadhitaano joogto ah dhakhtarka xoolaha si aad u qabsatid wax cillad ah goor hore. Kansarku wuxuu isu soo bandhigi karaa siyaabo kala duwan, sidaas awgeed daaweyntu sidoo kale way kala duwan yihiin.
Daaweyntu waxay noqon kartaa mid qalliin ama daaweyn ah, oo heerarka guusha ayaa ku xiran qofka.
Rajada Nolosha Terre Terrier-ka
Celceliska cimriga Airedale Terrier wuxuu u dhexeeyaa 10 ilaa 13 sano, taas oo u eg eey cabbirkoodu le'eg yahay. Dabcan, tani waxay kuxirantahay xaaladooda nololeed iyo waliba caafimaadkooda guud.
Xusuusnow in eeygaagu hareero joogi karo waqti dheer iyo in daryeelkiisa ay tahay ballanqaad weyn.
Nasiib darro, kansarku waa sababta ugu weyn ee Airedales ka gudubta buundada qaansoroobaad. Sahamin laga soo qaaday 2001, da'da weyn waxay ka qayb qaadatay 12% dhimashadooda Mareykanka .
Qoraal khafiif ah, haddii aad raadineyso inaad iibsato ama korsato eey, waxaad timid meeshii saxda ahayd.
Kahor intaadan ilmahaaga u keenin guriga, waxaad u baahan tahay inaad diyaarsato bay'ada, aad iibsato xoogaa caruusado iyo sariir, oo aad ka hesho dhakhtarka xoolaha ee kuu dhow. Royal Canin kuu diyaarinaya waxaad filan karto markii aad hesho eey cusub.
Goobaha Airedale waxaa laga heli karaa kuwa sameeya qiimaha u dhexeeya $ 1200 iyo $ 3000, iyadoo kuxiran taariikhdooda.
Haddii aad fiirineyso inaad korsato mid, qiimaha ayaa aad uga hooseeya $ 300 si loo daboolo qarashyada keynta. Dabcan, ka iibsashada ey eyda soosaaraha wuxuu ku siinayaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan asalkooda.
In kasta oo laga yaabo inaadan helin waxaad raadineysay markii aad korsanaysid eey, waxaad badbaadin doontaa nolol. Isku day inaad eegto korsashada kahor intaadan ka iibsan abuure; waxaad ka heli kartaa naftaada saaxiibka ah aqal.
Kireystayaasha Airedale Terrier
AKC waxay bixisaa liis muhiim ah oo ah kuwa sida rasmiga u diiwaangashan. Waxay sidoo kale muujinayaan helitaanka eey yaryar oo ka imanaya khadadka dhiigga qaarkood iyo macluumaadka loo yaqaan 'breed'. Xitaa waad daawan kartaa sawirada waalidiinta iyo eeydii hore.
Markaad dooranaysid abuure, hubi inaad ku sameyso cilmi baaristaada khadka dhiigga oo aad codsato dukumiintiyada nadiifinta. Fiiri astaantooda oo hubi inay diiwaangashan yihiin.
U fiirso boggooda intarnetka haddii ay mid leeyihiin oo la hadal kuwa soo saara. Isku day inaad la kulanto waalidiinta qashinka ka hor intaadan dooran eey.
Waxaan kugula talineynaa inaad dooratid eey yar oo farxad leh oo ciyaar leh, mid aan ka baqayn inuu kugu soo dhowaado. Ha dooran eeyga yar ee xishoodka leh ama kan dhibaya walaalaha.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad fiiriso qaar ka mid ah kubbadaha qurxoon ee la heli karo, halkan waxaa ku yaal liistada qaar ka mid ah soosaarayaasha:
Airedale Terriers Raadinta Guryo Furever ah
Habka ugu fudud ee lagu qaadan karo Airedale waa iyada oo loo maro hay'ad ku takhasustay nooca.
Qaadasho-a-Pet.com awoodi doonaan inay ku siiyaan urur kuu dhow oo laga yaabo inay Airedales u korsato. Waxay kaloo leeyihiin xayawaano kale hadaad xiisaynayso inaad uhesho walaalkaaga.
Qaar ka mid ah ururada samatabbixinta waxaa ka mid ah:
In kastoo eydaani u egyihiin, a Terry Welsh maahan Airedale. U fiirso isbarbardhigga soo socda si aad u muujiso isu ekaanshahooda iyo kala duwanaanshahooda:
Terire Terire Terry Welsh
Muuqaal Dheer iyo isboorti. Tan iyo madow ama jaakad jilicsan. Jaakad Wiri ah. Qaab laba jibbaaran, waliba isboorti. Tan iyo madow ama jaakad duug ah.
Dhererka 21-23 ' 13-15 '
Miisaanka 40-47lbs 15-20lbs
Shakhsiyadda Firfircoon oo madaxbanaan Waxay la jaan qaadi karaan xayawaannada kale. Madax adag Sidoo kale caqli iyo ilaalin. Firfircoon, waxaa laga yaabaa inay ku adkaato inay la noolaato xayawaanka kale. Caqli iyo ilaalin leh.
Taariikhda Asalka 1800-naadkii 1700-naadkii
Goobta Asalka England Wales
Dabi Docked Maya Haa
Waxaa jira noocyo kaladuwan oo Airedale ah oo leh noocyo kale. Waxaan ka baaraynaa qaar ka mid ah hoosta:
La kulan Airedoodle qurux badan oo ciyaar leh - Isha sawirka
Airedoodle wuxuu isugu jiraa Airedale iyo Poodle. Waxay ka soo bilaabeen Mareykanka , dadkuna waxay ku asli jireen wehel ahaan.
Waxay u koraan dherer u dhexeeya 22 iyo 27 ″ miisaankooduna wuxuu u dhexeeyaa 40 ilaa 65lbs. Wax badan ma daadiyaan taas oo ku xidhan nooca jubbadda nooca ay dhaxleen.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah iyaga halkan .
Eyga caqliga badan ee ilaaliyaha ah ee Lab’Aire - Isha sawirka
Lab’Aires waa isku dhafka Airedale iyo Labrador Retriever. Asalkoodu lama yaqaan maadaama ay yihiin nooc cusub.
Dadku waxay go'aansadeen inay u kibistaan ​​sida wehel iyo waardiye. Dhererka Lab’Aire wuxuu u dhexeeyaa 22 iyo 24 ″ miisaankooduna wuxuu u dhexeeyaa 50 ilaa 80lbs.
Waxay u muuqdaan inay leeyihiin laab ballaadhan, indhahooduna way ku kala duwan yihiin midab u dhexeeya hazel, bunni, iyo amber. Wagwalking.com waxay bixisaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan daryeelkooda.
Schnairedale, eeyga jacaylka iyo xiisaha leh - Isha sawirka
Goobahaani waa isku dhafka u dhexeeya Schnauzer iyo Airedale waxayna noqon karaan kuwo si aad ah u ciyaaraya. Waxay koraan ilaa 22 ″ oo dherer ah oo miisaankeedu yahay 50lbs, in kastoo dheddigga waxyar ka yar yihiin.
Badanaa waxay u egyihiin schnauzer, oo leh casaan ama sinjibiil. Waxay leeyihiin dhago jilicsan oo muujinaya muuqaalkooda jilicsan.
Halkan guji si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Schnairedale.
Kuwani eeyaha caqliga badan wax weyn ka dhig xayawaanka guryaha lagu haysto iyo eeyaha ilaaliya . Iyagu way madax bannaan yihiin waxayna naftooda ku mashquuli karaan muddo gaaban iyaga oo wata qalabka ciyaarta ee kiciya.
Haddii aad tahay qof firfircoon, Terire Terrier-ka ayaa kugu habboon.
Markii keligood la daayo muddo dheer, waxay u dhaqmi karaan wax dumin iyagoo calalinaya iyo xanaaq. Waxay sidoo kale laga yaabaa inay ka boodaan xayndaabka ama ay qoddaan sidoo kale. Haddii aadan firfircooneyn oo aad dhaqso u daasho, eeygan adiga kuma haboona.
Qiimaha Bulldog Faransiis: Immisa ayey ku Baxayaan Ey Buluqog Faransiis ah?
Pitbull Pocket: Waxkasta oo Aad Ka Baran Laheed Eyda Booc-boocsiga
Madow shaybaarka adhijirka isku darka puppy
casaan iyo casaan cad oo indho buluug ah leh
farqiga u dhexeeya dib u soo celinta dahabka iyo shaybaadhka jaalaha ah
dib u soo celinta dahabka iyo cocker spaniel isku darka
intee in le'eg ayay ubadku seexdaan